Croatia: onye ụkọchukwu na-enwe obi abụọ banyere Oriri Nsọ na onye nwe ụlọ ahụ malitere igba obara | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Croatia: onye ụkọchukwu nwere obi abụọ banyere Oriri Nsọ na onye nnabata ahụ malitere igba ọbara
Ebube Eucharistic N'oge Mass na Ludbreg Croatia na 1411.
Otu ụkọchukwu enweghị obi abụọ na Isi na Ọbara nke Kraịst dị adị n'ezie na ụdị Oriri Nsọ. Ozugbo e doro ya nsọ, mmanya ahụ ghọrọ Ọbara. Ọbụna taa, ihe dị oké ọnụ ahịa nke Ọbara Ọrụ Elu na-adọta ọtụtụ puku ndị kwesịrị ntụkwasị obi, kwa afọ na mbido Septemba a na-eme "Sveta Nedilja - Sọnde Dị Nsọ" ruo otu izu maka nsọpụrụ ọrụ ebube Eucharistic nke mere na 1411.
Na 1411 na Ludbreg, na ụlọ ụka nke Count Batthyany, otu ụkọchukwu mere emume ọtụtụ mmadụ, mgbe a na-edo mmanya ahụ nsọ, ụkọchukwu ahụ nwere obi abụọ na eziokwu nke transubstantiation na mmanya dị na chalice ghọrọ ọbara. N'amaghị ihe ọ ga-eme, ụkọchukwu ahụ sakwasịrị ihe a dị n'akụkụ mgbidi n'azụ ebe ịchụàjà ahụ dị elu. Onye oru nke rụrụ ọrụ ahụ swụrụ iyi ịgbachi nkịtị. Onye ụkọchukwu ahụ zochiri ya ma kpughee ya naanị n'oge ọnwụ ya. Mgbe ụkọchukwu ahụ kpughere, ozi ahụ gbasara ngwa ngwa ma ndị mmadụ wee malite njem njem na Ludbreg. Mgbe nke a gasị, wetara Holy See nke dị ebube nke ọrụ ebube ahụ na Rome, ebe ọ nọrọ ọtụtụ afọ. Ndị bi na Ludbreg na ndị gbara ya gburugburu, ka nọ na-aga njem uka nke nnukwu ụlọ ụka.
Na mbido afọ 1500, mgbe a na-eme popepu nke Pope Julius nke Abụọ, akpọrọ kọmịshọn na Ludbreg iji nyochaa eziokwu metụtara ọrụ ebube Eucharistic. Ọtụtụ mmadụ agbaala akaebe na ha natara ọgwụgwọ dị egwu mgbe ha na-ekpe ekpere n’ihu ihe akpụrụ akpụ. N'April 14, 1513, Pope Leo X bipụtara otu ehi nke na-ekwe ka asọpụrụ nke ihe ngosi dị nsọ nke ya onwe ya buuru ọtụtụ oge na-aga n'okporo ámá Rome. E mechara nyeghachi relic na Croatia.
Na narị afọ nke 15, ihe otiti ahụ bibiri ebe ugwu Croatia. Ndị mmadụ chigharịkwuuru Chineke maka enyemaka ya na ndị omeiwu Croatian mere otu ihe ahụ. N'oge nnọkọ emere na Disemba 1739, 1994 n'obodo Varazdin, ha swụrụ iyi iwuru ụlọ ụka na Ludbreg iji kwanyere ọrụ ebube ugwu ma ọ bụrụ na ihe otiti a akwụsị. E gbochiri ihe otiti ahụ, mana enwere ntuli aka ahụ e kwere ná nkwa naanị na 2005, mgbe e weghachiri ọchịchị onye kwuo uche ya na Croatia. Na 18 na ụlọ ụka ndị omeiwu, onye na-ese ihe Marijan Jakubin sere nnukwu fresco nke Nri Anyasị Ikpeazụ nke ndị nsọ Croatian na ndị gọziri agọzi dọtara karịa Ndịozi. St John nọchiri ya bụ onye a gọziri agọzi Ivan Merz, onye a gụnyere n'etiti mmadụ iri na asatọ kacha mkpa ndị nsọ dị nsọ na akụkọ ntolite nke Churchka n'oge Synod nke ndị Bishọp emere na Rome na 2005. Na eserese,